Abavelisi kunye nabaxhasi be-WPC yebhodi yegumbi - china iBhodi yebhodi ye-WPC yefektri
I-WPC Sintra Sheet yePlastiki, ekwabizwa ngokuba yibhodi yeplastiki yePlanga, lolunye udidi lwebhodi ye-PVC yebhodi. Ibhodi yegwebu ye-WPC iveliswa nge-PVC resin kunye nomgubo weenkuni oxutywe kumyinge othile, wongezwa ngezongezo ezizodwa ngefomula eqhubele phambili, eyenziwe ngegwebu kunye nokukhutshelwa kubushushu obuphezulu ekugqibeleni ukwenza ifom.
I-WPC Sintra Plastic Sheet inemvakalelo ngomthi, kodwa ayinamanzi kwaye inomlilo. Yinto elungileyo endaweni yomthi, iplanga, ibhodi yokucheba kunye ne-Medium Density Fiberboard (MDF).
Iphepha elimnyama le-PVC 5mm
Iphepha elimnyama le-PVC 5mm luhlobo lwebhodi yegwebu ye-WPC. Ibhodi yeplastiki yeplanga luhlobo lomthi (iselulosi yomthi, iselulosi yokutyala) njengezinto ezisisiseko, izinto zepolymer ze-thermoplastic (iplastikhi) kunye nezinto zokulungisa, njl., Kwaye emva koko uzixube ngokulinganayo. I-high-tech eluhlaza kunye nokusingqongileyo-inobuhlobo izinto ezintsha zokuhombisa ezenziwe ngobushushu kunye ne-extrusion yokubumba kwezixhobo zokubumba ezineempawu kunye neempawu zomthi kunye neplastiki. Luhlobo olutsha lwezinto ezidityanisiweyo ezinokuthi zithathe indawo yeplanga kunye neplastiki.